एडोल्फ हिटलरको मेइन काम्पफ द्वारा डोनाल्ड ट्रम्प विशेष संस्करण
19 अक्टोबर 2016
19। अक्टोबर 2016 Oliver Bienkowski
स्टिकी पोष्ट By Oliver Bienkowski On 19। अक्टोबर 2016
हजारौं शब्दहरू प्रतिस्थापन गरेर काल्पनिक मेइन Kampf पुनःसङ्ख्या
प्रेस लेखको चित्र ग्यालरी
पुरानो पुस्तकमा हजारौं शब्दहरू बदली गरेर हामीले काल्पनिक नायकको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको साथ एडोल्फ हिटलरको “मेन कम्फ” को नयाँ संस्करण सिर्जना गरेका छौं। अब काल्पनिक आत्मकथा ट्रम्पको न्यु योर्कको जवान बच्चादेखि कडा अमेरिकी व्यापारी र राजनीतिज्ञसम्म पुग्छ। यो समानान्तर कथामा, ट्रम्पले २०१ 2016 को चुनाव पछि १ 1923 २ in मा हिटलरको फेल्डेरेरहेल्लेन कुपनसँग मिल्दोजुल्दो कुराकानी सुरु गरे। उनी पक्राऊ परे र अधिकतम सुरक्षा कारागारमा पठाइए, उनका धेरै रिपब्लिकन समर्थकहरू क्यापिटल र ह्वाइट हाउसको अगाडि खडा भए। जातीय र धार्मिक शुद्धिकरणको विचारको आधारमा अमेरिकी राष्ट्रवादी पार्टी फेला पार्दछ, मेक्सिको, मुस्लिम र उनीहरूको राष्ट्रवादी विश्वव्यापी दृष्टिकोणलाई जोखिममा पार्ने जोसुकैले पनि शत्रु बनाउँदछ।
ट्रम्पको परिप्रेक्ष्यमा "Mein Kampf" को नयाँ संस्करण लेख्ने लक्ष्य ट्रम्प र हिटलर दुबैको विचारहरु को समानता को बारे मा जागरूकता जगाउनु थियो। यो फरक समय हो (१ 1930 s० दशक बनाम आज), बिभिन्न देश (जर्मनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका), र बिभिन्न शत्रु (यहूदी बनाम मुसलमान), तर अवधारणाहरू उस्तै छन्। ट्रम्पले हामीलाई आफ्नो भाषण र ट्वीटहरू मार्फत अमेरिका र विश्वलाई उनीहरूले पुर्‍याउन सक्ने खतराहरूबारे केही अन्तरदृष्टि प्रदान गरिसकेका छन।
अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग अमेरिकी नागरिकहरू मात्र नभएर यस ग्रहका सबै मानिसहरूमा ठूलो शक्ति र प्रभाव छ। ट्रम्पको राष्ट्रपति पदले जातीयता र पूर्वाग्रहको चिप्लो रनवेको सुरुवात चिह्न लगाउन सक्छ जुन हामी अहिले कल्पना गर्न सक्दैनौं। यदि "Mein Kampf" को यो अद्यावधिक संस्करणले ट्रम्प र हिटलर बीचको समानताहरू हाइलाइट गर्न सक्दछ भने, तब पिक्सेल हेल्परले अमेरिकी जनतालाई एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी दिने प्रबन्ध गरेको छ।
अमेजनमा मूल्य 0.99 $ हो, सबैले हामीलाई एक प्रतीकात्मक दानको लागि किताब प्राप्त गर्दछन्। सबै आयहरू मानव अधिकार अभियानहरू र कला कार्यक्रमहरूमा पिक्सेल HELPER द्वारा चल्नेछ। दान पछि, हामी तपाईंलाई ई-मेल मार्फत * epub ढाँचामा पुस्तक पठाउनेछौं। तपाईंको दानको साथ कृपया आफ्नो ई-मेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाईं यसलाई तल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
PixelHELPER कलाकारहरूको सामूहिक, एक अन्तरराष्ट्रीय गैर-मुनाफा अल्पसंख्यक र Freemasons को आदर्शहरु द्वारा प्रेरित मानव अधिकार संस्था हो। संसारको शोरबाट अज्ञात, हामी आफ्नो बाटोमा शान्त र सुरक्षित, खतरामा नराम्रो, पृथ्वीको रक्षा गर्न मनमा उच्च लक्ष्यहरू जान्छौं।
साझेदारी गर्नु हो।
खाता धारक: PixelHELPER फाउण्डेशन गैर-लाभकारी संगठन
थप जानकारीको लागि: https://PixelHELPER.org
अभियान भिडियो र टीवी सवारी | ड्यूश वेले |
डबल डेकर बसबाट फेडरल चान्सेलरीमा लाइट स्थापना
कृपया फेसबुक र ट्विटरमा हाम्रा परियोजनाहरू साझेदारी गर्नुहोस्! यदि तपाईंले हाम्रो कारणलाई समर्थन गर्नुभयो भने, हामी कुनै दानको लागि आभारी हुनेछौं ताकि हामी हाम्रो अभियानलाई स्थायी रूपमा जारी राख्न सक्दछौं।
केही यूरोहरू पनि फरक पार्छन्! साझेदारी गर्नु हो। कृपया हाम्रो धैर्य कामको समर्थन गर्नुहोस्। कृपया Paypal, Betterplace, Indiegogo वा क्लासिकल ट्राफिक प्रयोग गर्नुहोस्।
मालिक: PixelHELPER फाउण्डेसन गैर-लाभकारी GmbH
►राम्रो ठाउँ https://www.betterplace.org/de/projects/41782
एडोल्फ हिटलरको मेइन काम्पफ द्वारा डोनाल्ड ट्रम्प विशेष संस्करण अक्टोबर 23rd, 2016Oliver Bienkowski